Fahad Yaasiin oo la wareegay Maamulka Madaxtooyo. – Hornafrik Media Network
Agaasimaha cusub ee Madaxtooyada Soomaaliya, Fahad Yaasiin Xaaji Dahir ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay Maamulka Madaxtooyo, labo todobaad kaddib markii xilkan uu u magacaabay Madaxweyne Farmaajo.
Fahad Yaasiin ayaa shalay dalka dib ugu soo laabtay, kaddib safaro dibadda ugu maqnaa, markii la magacaabay, waxaa la sheegay inuu tagay dalka Qatar, gaar ahaan magaalada Doxa, isagoo iska soo casilay shaqadii uu Xarunta Dhexe ee Al Jazeera ka hayay.
Warar ku dhow dhow Madaxtooyada ayaa sheegaya in Fahad Yaasiin uu xilka ku wareejiyay Agaasime kuxigeenka Madaxtooyada C/risaaq Shoole, maadaama uu dalka ka maqan yahay Agaasimihii hore ee Madaxtooyada Abuukar Baalle.
Mr Fahad Yaasiin ayaa si rasmi ah isla maanta ugu fariistay Xafiiska Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada, waxaana isha lagu hayaa sida uu ku maamulo Villa Soomaaliya oo ah muraayadii dalka.
Marka laga soo tago inuu ahaa Wariye caan ah oo ka shaqeeyay Telefishinka afka Carabiga ku hadla ee Al Jazeera, Fahad waa nin degan, af gaaban, tixgelin badan, waxaa la sheegaa in saameyntiisa siyaasada ay soo if baxday sanadkii 2012, xilligaasoo doorar aan qarsooneyn ka soo qaatay doorashadii Madaxweyne Xasan Sheekh, sidoo kale waxaa uu kaalin ka soo qaatay doorashadii Farmaajo ee sanadkan.
Madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa saddex agaasime yeelatay, oo mid ka mid ah uu ahaa KMG, kaddib markii Madaxweyne Farmaajo si rasmi ah xafiiska ula wareegay.
Dadka falanqeeya arrimaha siyaasada ayaa sheegaya in Saameynta Mr Fahad Yaasiin uu xilligan ku leeyahay dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo ay tahay mid ka ballaaran tii Faarax Sheekh C/qaadir uu ku lahaa dowladdii Madaxweynihii hore Xasan Sheekh, marka la is bar bar dhigo awoodaha ay dowladda dhexdeeda ku leeyihiin.
Madaxtooyadda Somalia oo kala qaybisay Maamulka Hirshabelle.